“ရွှေမြန်မာ”: July 2008
အပိုလိုလိပ်ပြာ (Apollo Butterfly) ဆိုတာက Papilionide လိပ်ပြာမျိုးနွယ်ဝင် လိပ်ပြာတစ်မျိုးပါပဲ။ ဥရောပတိုက်ရဲ့မီတာ ၁၀၀၀ မှ မီတာ ၂၀၀၀ အထိ မြင့်မားတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ ကျက်စား ပျံဝဲလေ့ရှိတဲ့ လိပ်ပြာတွေဖြစ်တယ်။ ပန်းတောအုပ်တွေနဲ့ တောင်တန်းပေါ်က လွင်ပြင်တွေကတော့ မျိုးတုံးမယ့် အန္တရာယ်ကို ပွဲဦးထွက် ရင်ဆိုင်ကြရမယ့် အင်းဆက် ပိုးကောင်မျိုးနွယ်တွေထဲက မျိုးနွယ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး ဖင်လန်နဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွေထဲမှာ အပိုလိုလိပ်ပြာ အရေအတွက် အံ့မခန်း ကျဆင်းလျော့နည်းလာတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို ဖြစ်ရသလဲဆိုတာကိုတော့ သေချာပေါက် မသိရသေးဘူး။ ရောဂါတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းတွက်ဆနေကြတာပေါ့လေ။ အက်စစ်မိုး ရွာသွန်းခြင်းနဲ့ အပိုလိုလိပ်ပြာ ကပ်သင့်ရခြင်းတို့ ဆက်စပ်မှု ရှိနိုင်တယ်လို့ အနုမာန တွက်ဆကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအပိုလို လိပ်ပြာတွေကို ခါကာဘိုရာဇီတောင်တန်းပေါ်မှာ တွေ့မြင်နိုင်ကြောင်း သိရှိရတယ်။ ဥရောပမှာ မျိုးတုံးသွားတဲ့ အပိုလိုလိပ်ပြာတွေကို ကြည်နူးဖွယ် တွေ့မြင်နိုင်ခြင်းဟာ လူသားတွေအတွက် မင်္ဂလာတစ်ပါးလို့ ဆိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သဘာဝကြီး တည်တံ့သာယာနေခြင်းဟာ လူသားတွေ ဆက်လက်တည်တံ့နိုင်ခွင့်ရှိနေခြင့်း ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, July 26, 2008 1 comment: Links to this post
ကျွန်မရဲ့ လေးလေးမှာ ပေးစာဖြစ်ပါတယ်။
နတ်လူသတ္တ၀ါအားလုံး ဘေးရန်ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲကင်း၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျာချမ်းသာကြပါစေ၊ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ။
ဘုရားတပည့်တော်၏ သမီးငယ်လေး မယမင်းသည်လည်း ယခုမွေးနေ့မှသည်အနှစ်တစ်ရာတိုင်အောင်ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် သမီးအလိုရှိအပ်သော အေးချမ်းအောင်မြင်သည့်ဘ၀လေးကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေ။
သမီးရဲ့ ဒီမွေးနေ့မှာ ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ လေးလေး ဘုရားမှာ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်သမီးရယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, July 20, 2008 No comments: Links to this post
သြော် ပြောရဦးမယ်။ ခုခေတ်ကလေးတွေက အာဇာနည်နေ့ဆိုတာ R ဇာနည်ရဲ့ မွေးနေ့လားတဲ့။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, July 19, 2008 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, July 18, 2008 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, July 13, 2008 No comments: Links to this post
ကျွန်မ ပြောပြရရင် stick က စတယ်လို့ပြောရမယ်။ ဆိုဒ်ဘာတွေမှာ သုံးတော့ တစ်နေ့ ဘယ်က ဗိုင်းရပ်ပါလာသလဲတော့ မသိဘူး။ ပထမ မသိဘူး ဖတ်ချင်တဲ့စာတွေ download လုပ်လာပြီး ပြန်ဖွင့်ရင် ဘာမှ မပေါ်ဘူး။ ဒါနဲ့ kaspersky6ကနေ7ကိုချိန်း လုပ်ကြည့်တယ်။ မရဘူး။ ဒါနဲ့ version9တင်ပြီး run ကြည့်ပါသေးတယ်။ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ AVG တို့ avast တို့ nero တို့နဲ့လည်း စမ်းသပ်ကြည့်တယ်။ ဘယ်လိုမှ မသေဘူး။ ပြီးတော့ format ချတော့လည်း မရဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဟော ခု ကွန်ပျူတာမှာပါ Virus ၀င်နေတာ ဘာမှ သုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ Kaspersky9နဲ့ လုပ်လည်း မရဘူး။ စက်ဖွင့်လိုက်ရင်ကို error က လာတက်နေတယ်။ ပြီးတော့ Start bar လည်း ပျောက်နေပြီ။ software တွေလည်း ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး။ stick မှာ ၀င်တဲ့နေတာက svchost.exe, Worm. win32,Autoit လို့ ပေါ်နေပါတယ်။ ဘာတွေလည်းတော့ မသိဘူး။ အဲ ကွန်ပျူတာမှာတော့ worm.P2P. qeneric လို့ တက်တက်လာတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။ ကူညီကြပါဦးနော်။
ဘာမှလည်း သုံးလို့မရတော့ဘူး ဟင့် ဟင့် ဟင့်
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, July 11, 2008 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, July 10, 2008 1 comment: Links to this post
အဲ အဲဒီမှာတင် Unicode ဆိုတာကြီး ၀င်လာတာ သိရတယ်။ Computing အတွက် ကျောက်စာတကာတို့ရဲ့ ဘိုးအေ Rosetta Stone လို့ တင်စားခေါ်ဆိုနိုင်လောက်တယ်။ Unicode Standard အရေးအသား ဘာသာစကား ၃၀ ကျော်ရဲ့ စာလုံး၊ သင်္ကေတ သို့မဟုတ် glyph တစ်ခုစီအတွက် မတူမထပ်တဲ့ ဂဏန်းများ သတ်မှတ်ပေးတယ်။ ထပ်မံကြီးထွားလျက်နေပါလားလို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျွန်မ သိရသလောက်ပေါ့။ Unicode Standard 5.1 ဆိုလား ထွက်လာတယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဟော နောက် ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်တဲ့ နောက်မကြာပါဘူး။ မိုင်မြန်မာယူနီကုဒ်ဆိုပြီး ကျွန်မ ထပ်မံ သိလာရပြန်ပါတယ်။ အဲ အဲဒီမှာတင် ဘယ်ယူနီကုဒ်က အစစ်လဲ။ ယူနီကုဒ်ဆိုတာဘာလဲ။ ကျွန်မ သိချင်ခဲ့ပြန်ရော။ တတ်လို့လည်း မဟုတ်သလို နားလည်လို့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ သိချင်တာသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလို လူပိန်းတစ်ယောက်က ဒါတွေ သိဖို့ လိုအပ်လား။ နောက်ပိုင်း လူတွေ တော်တော်များများ ယူနီကုဒ်ပဲ သုံးကျတော့မှာလား။ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ရိုးရိုးဖောင့်နဲ့ဘာကွာလဲ။ ကျွန်မ နည်းပညာတွေကို လိုက်မမီတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သိချင်ခဲ့တယ်။ ဒီယူနီကုဒ်ဆိုတာတွေ ဘယ်နေရာမှာ သုံးကြမှာလဲ။ ခုသုံးနေတဲ့ ဖောင့်တွေကရော သုံးလို့မဖြစ်ဘူးလား။ တကယ်လို့ ယူနီကုဒ်တွေရော ရိုးရိုးဖောင့်လို သုံးလိုမရဘူးလား။ ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်လဲ။ ကျွန်မ လေ့လာမိသလောက် ယူနီကုဒ်တွေက ခုထိ အပြီးထိ မရောက်သေးဘူး။ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ သွားကြမှာလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာ ပြီးဆုံးမှာလဲ။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်မ စတွေ့တာကတော့ ဘလောဂ့်စလုပ်တဲ့အချိ်န် ၂၀၀၅ - ၂၀၀၆ မှာပဲ ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်နဲ့ စတွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဇော်ဂျီမှာ ဖောင့်တွေ ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။ ကျွန်မ မသိဘူး။ ကျွန်မ ဘလောဂ့်လုပ်ဖြစ်ကတည်းက အစားအသောက်၊ အသွားအလာ၊ အ၀တ်အစား ချွေတာပြီး အင်တာနက် သုံးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလို့ ကိုယ့်blog မှာ ရေးလို့ရတဲ့အတွက် ကျွန်မ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ဒီလို လုပ်ပေးတဲ့သူတွေ ဘယ်သူတွေဆိုတာလည်း မသိသေးတဲ့အချိန်ထဲက ကျွန်မ ကျေးဇူးအရမ်းတင်မိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မမှာ အင်္ဂလိပ်စာ အရမ်းအားနည်းတဲ့အချက်ကြောင့်ပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ မတောက်တခေါက် ပညာလေးနဲ့ သိတာ၊ မြင်တာ၊ ကြားတာလေးတွေ တင်ပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်မှာလည်း ဆိုက်ဘာတွေက ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ရိုက်ပုံခြင်းတွေလေ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူဘူး။ အောက်ပဆင့်တွေဆို တချို့ဆိုင်တွေမှာ ရိုက်လို့ရပေမယ့် တချို့မှာ မရပြန်ဘူး။ ဒီတော့ စာကို အသံထွက်နဲ့ ရိုက်ရတာတွေ ဖတ်မိတော့ တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မလည်း သိသလောက် အသိလေးနဲ့ ဆက်လာခဲ့တာပါ။ အခု အမှန်ပြောရရင် ဇော်ဂျီယူနီကုဒ် နာမည်တက်လာတာဟာ blog တွေကြောင့်ဆိုလည်း မမှားဘူးလို့ ကျွန်မ ယူဆမိပါတယ်။ ဒီပြင် ယူနီကုဒ်ကျတော့ သုံးခွင့်မရတာရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလည်း ဇော်ဂျီလောက် မရတာရယ် တက်မလာတာလို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ တစ်မျိုးပဲရှိရမှာမလား။ ဘယ်ဟာက အစစ်အမှန်လဲ။ တကယ်လို့သာ ယူနီကုဒ်လုပ်တဲ့သူတွေအားလုံး သတ်မှတ်ချက် မထားဘဲ ယူနီကုဒ်တစ်ခုတည်းအတွက် အာရုံစိုက်ပြီး စုစုစည်းစည်း တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်သွားရင်ကော ဒီထက် ပိုပြီး မအောင်မြင်ဘူးလား။ ယူနီကုဒ်အားလုံးဟာ ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်လို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လူတိုင်း ဘယ်နေရာမဆို သုံးပိုင်ခွင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရလာခဲ့မယ်ဆိုရင်............
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, July 08, 2008 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, July 03, 2008 1 comment: Links to this post
အရာရာ ယုံကြည်ဖို့ ခက်တယ်ကွယ်...
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, July 01, 2008 1 comment: Links to this post